Musiyano uripo pakati pekuvhura rezinesi uye rezinesi rekuita | Ehupfumi Zvemari
Kana isu sevanamuzvinabhizimusi isu tichida kuvhura chitoro kuti tishandire vatengi vedu, isu tinomhanya mune mamwe maitiro anotenderwa ayo ari rezinesi rekuita uye rezinesi rekuvhura. Asi pakati pemaitiro mazhinji anowanzodiwa, mubvunzo unomuka: Marezinesi acho mamwe chete akafanana here? Uye kana zvisiri, ndeupi musiyano?
Mhinduro inokurumidza ndeyekuti ivo vaviri vane chinangwa chekumiririra mvumo yakapihwa neGuta Kanzuru yekuita zviitiko zvehupfumi, asi rezinesi rekuvhura riri munzvimbo, uye rezinesi rekuita rakafanana, asi uchibvumidza chiitiko chinoitwa namuzvinabhizimusi. Ngatinyatso tarisei pazvinodiwa uye misiyano yeese marezinesi.
1 Rezinesi rekuvhura
1.1 Zvinodikanwa zvinofanirwa kuzadzikiswa kuti uwane rezinesi rekuvhura
2 Maitiro ekuona kutevedzera nemitemo yekupa rezinesi rekuvhura
2.1 Kanzuru yeguta inoona sei kuti nzvimbo yedu inosangana nezvinodiwa kuti tikwanise kushanda?
3 Kuzivisa zvine mutsigo chiitiko
4 Rezinesi rekuita
4.1 Zvekuita rezinesi zvinodiwa
Iri rezinesi rinongova chitupa chinopihwa neGuta Kanzuru mvumo yenzvimbo yekuvhura madhoo ayo kuruzhinji. Izvi zvinovimbisa kuti inosangana nezvinodiwa zvinokumbirwa kuti zvikwanise kuita kuvhura uku.
Zvinodikanwa zvinofanirwa kuzadzikiswa kuti uwane rezinesi rekuvhura
Chekutanga chinodikanwa chinofanirwa kuzadzikiswa ndechekuti zvese mashandisirwo uye mamiriro ezvinhu iko iko chivakwa chinofanirwa kuve chinokwanisa kutevedzera tsika dzemaguta izvo zvakaitirwa kuitira kuvimbisa kuvimbika kwenzvimbo yacho kune zvinangwa zvaunoda kushandisa.
Chechipiri chinodikanwa chinofanirwa kusangana chine chekuita nacho nyaya dzekuchengetedza, uye ndeyekuti nzvimbo yacho inofanirwa kuve nezviyero zvese zvekurwisa moto, izvo zvinofanirwa kukwana kuzadzikisa zvido zvedzimba, zvinoenderana nesaizi, zvimiro zvesisitimu, uye nzira dzekubuda, kusangana nehukuru hwenzvimbo yacho.
Chimwe chinodikanwa chinofanirwa kuzadzikiswa kuti uwane rezinesi rekuvhura kuve nemwenje unodiwa kuti uve nechokwadi chekuti avo vari munzvimbo vanogona kushandisa zvakakwana zvivakwa. Uye zvakare, iwe unofanirwa kuve uine kufefetedza zvakakwana zvinoenderana nerudzi rwebhizinesi, kuitira kuti uve nemhepo yakanaka mhando mukati meimba.
Imwe yenzvimbo dzekuchengetedza dzinofanirwa kuteedzerwa ndeiyi utsanana zvinodiwa zvakafanira kupa mamiriro akakwana kune vashandisi. Iyi poindi inonyanya kukosha kune iyo nzvimbo inoda kushandiswa kumisikidza mabhizinesi ezvekudya kana zvimwe zvigadzirwa kana masevhisi ane hukama hwakanangana nehutano hwevatengi, uye yeavo vanoshanda munzvimbo.
Uye sezvo isu tichitaura vanobatsirana vanoshanda munzvimbo, zvakakosha kutaura kuti vanofanirwawo kusangana mitemo yehutano nekuchengetedza muzvinhu zvese zvine chekuita nevashandi.
Kune rimwe divi, parizvino imwe yenyaya dzakakosha kuchengetedza nharaunda, ndosaka zvichizodikanwa kutevedzera mitemo yekuchengetedza nharaunda, senge chisi cheCO2, tsvina, nezvimwe. Saka zvinonyanya kukosha kuti tizivise isu pachedu pamusoro pemirau iyi kuti tiite zvizere nechinhu ichi.
Imwe pfungwa yakakosha kwazvo nhasi kugona kuzadzisa zvido zvevanhu vakaremara.
Maitiro ekuona kutevedzera nemitemo yekupa rezinesi rekuvhura
Asi ikozvino isu tava kuziva iyo mitemo yatinofanirwa kutevedzera, ikozvino mumwe mubvunzo unomuka
Kanzuru yeguta inoona sei kuti nzvimbo yedu inosangana nezvinodiwa kuti tikwanise kushanda?
Kugona kuvimbisa kutevedzera izvi zvinodiwa Izvo zvakakosha kuti isu tinyore munhu akadzidziswa nyanzvi kuti ape pfungwa. Nyanzvi dzakadzidziswa dzinowanzo mapurani kana mainjiniya; kunyanya avo vane hunyanzvi munzvimbo dzekuchengetedza kana huinjiniya. Ndivo vanozogona kuita chiitiko chebasa.
Kamwe nyanzvi inosayina chirongwa chebasa, nekudaro kuratidza kuti nzvimbo yacho inosangana nezvinodiwa kuti vakwanise kuvhura mikova yayo kuruzhinji. Zvino, isu tinofanirwa kutaura kuti ndeipi nguva yakanakira kutipangira nyanzvi iyi, uye izvi zvinoenderana neruzivo rwedu.
Kana ruzivo rwedu munzvimbo iyi, nguva yekubata nyanzvi ichave kana tichida chirongwa chebasa. Nekudaro, sezvazvinowanzoitika, nyaya yedu inogona kunge iri yekushaya ruzivo rwakakwana mumunda, mune iyi nyaya tinofanirwa kubata nyanzvi tisati tatanga kuona nzvimbo yatinga vhura bhizinesi redu.
Icho chikonzero chekuti isu tinofanirwa kutaura newe kubva padanho rekutanga reprojekti ndechekuti kana chirongwa chikatsanangurwa, tinogona kuenderera nekutsanangura izvo zvivakwa, kuitira kuti tishanyire nzvimbo dzesarudzo dzinoenderana nezvatinoda. Chikonzero ichi chakakosha ndechekuti haazi mabhizinesi ese ane zvakafanana zvinodiwa, haisi nzvimbo dzese dzinopa zvese mabhenefiti angangodiwa.
Kuzivisa zvine mutsigo chiitiko
Usati waenderera kumberi kwepfungwa yechinyorwa chedu, zvingave zvinobatsira kutaura kuti pane mukana we tanga kushanda pasina chikonzero chekumirira kusvikira nguva yekuve nerezinesi rekuita. Uye iyi sarudzo inonzi kuzivisa zvine chekuita nebasa.
Izvi zvinokwanisika zvinobva pakudiwa kwekurerutsa maitirwo ehurongwa kubvumidza maSpanish kuti avhure kambani. Nenzira yekuti zvinhu zvekushambadzira zvine nzvimbo ine nzvimbo isingasviki mazana matatu emamirimita, zvine mukana uyu wekumhanyisa kutanga kwekutengeserana mashandiro erudzi urwu rwebhizinesi.
Zvino, zvakakosha kujekesa kuti chokwadi chekuti pane kuziviswa zvine mutsindo chezviitiko hachiregerere isu kubva pachidanho chekuita maitiro kuitira kuti tipe rezinesi rekuvhura. Izvo zvinongotibvumidza isu kuvhura mikova kubva pazuva iro maitiro acho anotanga.
Sezvo isu takaongorora rezinesi rekuvhura, zvave kuita ongorora rezinesi rekuita. Gwaro iri rinodiwa kuitira kuti nzvimbo yatinoda kuvhurira vatengi vedu ishandiswe. Saka chinhu chekutanga chatichazotaura ndechekuti chinodiwa kune ese marudzi ebhizinesi, kunze kwezviitiko zvine hunyanzvi, zveunyanzvi, uye mabasa ehunyanzvi.
Imwe mamiriro ezvinhu iyo rezinesi rekuita risingadiwe ndipo kana zviitiko zvekushambadzira zvisingaitwe munzvimbo, asi mumba mevanhu. Kana yemuno haina kutengeswa chaiko kuruzhinji inogarawo kunze kweiri rezinesi. Chekupedzisira, isu tinosunungurwa kana bhizinesi redu riri rimwe chiitiko chisingakuvadzi.
Zvekuita rezinesi zvinodiwa
Zvino ngatienderere mberi kuongorora iyo zvinodiwa kuti ukwanise kugadzirisa rezinesi rekuita, uye panguva ino zvakakosha kutaura kuti izvo zvinodiwa hazvigone kuverengerwa, nekuti zvinoenderana zvakajeka nerudzi rwechiitiko chiri kuzoitwa mubhizinesi.
Asi ngatitaurei nezve mapoinzi akajairika kune ese maitiro e Rezinesi rekuita. Chinhu chekutanga kuve neshumo rakagadzirwa nehunyanzvi tekinoroji ine chinzvimbo chakakodzera. Chirevo ichi chichaitwa pachishandiswa ongororo yezvivakwa izvi. Muizvi kuongorora kwehunyanzvi Iwe unozofanirwa kuita zviyero zvakati wandei kuti ubvumire kuyerwa kweiyo imba.
Gare gare unofanira kuita macheki enzvimbo yemidziyoIzvi zvinosanganisira mvura, magetsi, uye zvese zvinodiwa kuti ugone kuita basa rekushambadzira nenzira kwayo. Panguva ino, nyanzvi ichakwanisa kuratidza kana nzvimbo yacho ichizadzisa zvinodiwa, uye kana paine kushayikwa kupi, nyanzvi inoona nezvekuita mazano ekuvandudza zvivakwa.
Kana zviitiko zvikatambirwa kubva kune nyanzvi, zvigadziridzo zvinofanirwa kuitwa kune zvigadzirwa, mushure mezvo kechipiri ongororo nenyanzvi ichatevera. Uye maitiro aya anodzokororwa kakawanda sezvazvinodiwa kusvika iyo zvinodiwa kuti ukwanise kuita chimwe chiitiko.
Izvo zvinodikanwa kutaura kuti chinhu chinokurudzirwa kwazvo kudzivirira kuti pane kushomeka mushure mekudzokororwa kwakawanda, ndekwekuti shanduko dziri kutarisira nyanzvi imwecheteyo iyo yakaita kudzokorora. Izvi zvinobatsira nekuti iye nyanzvi achakwanisa kuendesa bhajeti uye kutora mutoro wekugona kuona kuti rake basa rinoenderana ne zvinodiwa kuti ugone kuita yekuvhura rezinesi maitiro.
Kana kamwe mushumo uyu wawanikwa, mauri zvinoratidzwa kuti zvemuno zvinoenderana ne zvinodiwa kuti zvishandeChirevo ichi chinofanirwa kuongororwa nesangano revanyanzvi, uye iyo ichafanirwa kupa anoenda kumberi kuendesa chirevo ichi kunzvimbo yehoro yedhorobha kunoitirwa chiitiko ichi kunoenderana. Panguva ino, mamwe magwaro anofanirwawo kuunzwa ayo anoshanda kuratidza humbowo hweanamuzvinabhizimisi ari kunyorera rezenisi.
Pamusoro pezvo, magwaro anoratidza kuve nezvivakwa mukati mayo zvakavakirwa, kungave nekutora zvakananga kana nekurenda, zvinofanirwa kuendeswa. Uye pakupedzisira, magwaro anoratidza kuti mubhadharo unoenderana nemubhadharo unoenderana nemaitiro aya uye zvese zvine chekuita nekuvhurwa kwenzvimbo iyi zvinofanirwa kuendeswa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » General hupfumi » Musiyano uripo pakati pekuvhura rezinesi uye rezinesi rekuita
Nzira yekuchengetedza mari pamari yemari?